E-China, basekhona abadobi abaningi abasasebenzisa indlela yendabuko yokudoba, kepha ayikho induku yokudoba phesheya, futhi bakhetha ukusebenzisa izinsimbi zokudoba ukudoba. Siyini isizathu? Kungani kunomehluko ongaka? Okulandelayo, landela i-KK ukuhlola! 1, Ukudoba endaweni I ...
Kunokwehluka okuthathu phakathi kwezikebhe zokudoba i-3000 kanye ne-4000. Ubude bolayini bokudoba buhlukile enkomishini, ijubane lokwamukela lihlukile, futhi isisindo sesikebhe sokudoba sihlukile; Lapho usebenzisa izikebhe zokudoba olwandle, izindinganiso zezimodeli zezikebhe zokudoba zivame ukumakwa ...
Akunzima ukuLure ukukhetha isondo lokudoba elifanele ngendlela efanele
Yize izinsizakusebenza zasekhaya zokuheha zingafani nezezwe langaphandle, akusho ukuthi azikho izinhlanzi zokuya eLure. Njengenye yezinhlanzi eziyintandokazi zeLure, i-qiaozui ithandwa kakhulu kubantu beLure. Kungenxa yokuthi umlomo kaLure ujabulisa kakhulu, ikakhulukazi cha ...
Imikhiqizo yochungechunge lwe-YAMASHITA
—— LIVE SEARCH —— Ubuhlalu bendandatho obakhelwe ngaphakathi, umzimba okhanyayo ugoqwe ngendwangu esezingeni eliphakeme yokushisa, futhi uhambisana nobude obukhethekile bokukhanya okungu-490 okubonakala kuma-squi ...
Iqhawe alibuzi mthombo? Lena indlela yokudoba edeleleke kakhulu ngabadobi baseTaiwan!
Muva nje, indlela yokudoba ihlasele i-Intanethi. Le ndlela yokudoba idinga kuphela induku eyodwa nomugqa owodwa. Akukho ukukhukhuleka okudingekayo, ingasaphathwa eyokulungiswa! Lokhu ukubamba induku okuyisidina! "Amakhosi" amaningi okudoba aseTaiwan angayidelela le ndlela yokudoba futhi ngqo ...
MARIA imikhiqizo yochungechunge
—— DUPLEX —— IMino yakudala, okumele ube nayo yokudoba olwandle, iyinkanyezi yamahhuku amathathu abukhali —— LEGATO F190 —— ...
Ukudoba ebusika, ukuqonda "inhlanzi" kuyisihluthulelo!
Ukuqonda imikhuba yezinhlanzi yingxenye ebalulekile yokwenza ngcono izinga lokudoba! Sonke siyazi ukuthi kunzima ukubamba izinhlanzi ebusika, kepha ingabe uyayazi imikhuba yezinhlanzi ezahlukahlukene ezibhekiswe ebusika? Kuphela lapho sijwayele imikhuba yasebusika yezinhlanzi, lapho singenza ushintsho ekuheheni, ulayini ...
Ukudoba i-Master Kawakami squid, ukuthi ungabhekana kanjani nolwandle olunodaka?
I-Shenzhen isanda kuhlangabezana nesiphepho somkhulumeli we-YAMARIA uMnu Hideyo Kawakami noMnu Guo Ji, inhloko ye-China Ifike lapha ngemuva kwesiphepho Lungiselela ukuhlola i-squid emimoyeni enamandla Ngemuva kwamaphenyi amaningi i-Yangmei Keng yakhethwa njengendawo yalokhu kudotshwa kwecala e ulwandle olumnyama lapho umoya ...
I-octopus, squid, squid, cuttlefish, yini umehluko phakathi kwazo?
Eyodwa, isihloko sihlukile 1. I-Octopus Bai: Octopodidae. 2. I-squid: Umndeni wakwa-Du waseCalamari, i-Family Decarbonidae. 3. I-squid: I-squid oda i-Radix Aconzhi Sidae. I-4.Cuttlefish: iTenebrionidae, i-Order Decarbida. Okubili, Izici ezihlukile zokuziphatha 1. I-Octopus: Umzimba we-octopus mfushane futhi u-oval ...
Izinti Zokukhanya Zokudoba Ngamanani Athengiswayo
IGlow With Us inikezela ngezinti ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokudoba ngamanani entengo aphansi kakhulu. Izinduku zethu zokukhanya kokudoba zinobungani bemvelo, ukuqhuma nokuqina kokuvuza nobufakazi bomswakama. Zisebenza kanjani izinduku ezivutha ukudoba? I-Fishing Glow Sticks isebenzisa ukusabela kwamakhemikhali ukukhipha ukukhanya. Uma ngaphakathi ...
Beacon vs ezishibhile off line glow stick .. kungani ngishintshele kwezishibhile ngemuva kokusebenzisa igama elithi brand iminyaka.
Ukunakwa okukhethekile: Ukupakisha kwethu kwemboni: ama-2pcs / isikhwama, ama-50bag / ibhokisi elingaphakathi, Ingqikithi yama-100pcs Amanye amabhizinisi asepulatifomu yokupakisha: ama-5pcs / isikhwama, i-10bag / ibhokisi langaphakathi, Ingqikithi yama-50pcs Intengo yefektri yethu iphansi kakhulu. Asiyona inkampani yokuhweba, Sinikeza inzuzo yabaphakathi ngqo kumakhasimende ethu ....
Ukuthuthukiswa komkhakha wezokudoba
Ngokwezibalo ezingaphelele ezikhishwe yiChinese Fishing Association ngonyaka ka-2015, kunabantu abangaba yizigidi eziyi-120 abadoba eChina (inani labantu abaya ekudobeni okungenani kane ngonyaka) .Ngaso leso sikhathi, ukudoba akuseyona amalungelo akhethekile we ...